यो तिहारमा कोरोना संक्रमितको निधार रित्तै हुने भो ! - हाम्रो शब्द
यो तिहारमा कोरोना संक्रमितको निधार रित्तै हुने भो !
गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिका–१२ का २० वर्षीय युवक प्रहरीमा जागिर खाने सोचले गत कात्तिक २२ मा बुटवल आएका थिए । तालिम लिनका लागि पीसीआर रिपोर्ट चाहिने भएपछि उनले भोलिपल्ट परीक्षण गराए । रिपोर्ट पोजेटिभ आयो । एक सातादेखि बुटवलको एन्फा आइसोलेसनमा बसेका छन् । स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भए पनि अर्को परीक्षण नहुन्जेल बाहिर जान नपाइने भएकाले उनको तिहार आइसोलेसनमै बित्ने भएको हो ।
तीन दिदीबहिनीका कान्छा भाइ उनले यस वर्षको भाइटीकामा दिदीको हातबाट टीका लगाउन नपाउने बताए । ‘सन्चो भएर घर जान पाए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘जागिर खाने सपना पनि पूरा गर्नु छ ।’ हरेक तिहारमा स्थानीय क्लबबाट देउसीभैलो खेली पैसा संकलन गरेर कार्यक्रम गर्ने गरेको सम्झना गर्दै उनले सुनाए । गाउँको बाटोमा रातिमा बत्ती बालेर चिच्याउँदै हिँड्दा र रोटी खाँदै रमाएको याद गर्दै बस्दै गर्नुपरेको सम्झिरहेका छन् । दिदीले फोन गर्दा आउन पाइन भनी बोल्दा भक्कानो छुट्ने गरेको उनले सुनाए ।
उनीजस्तै बुटवल–२ की २७ वर्षीया एक महिलाले पनि यो तिहार आइसोलेसनमै बिताउनुपर्ने भयो । यहाँको एक उद्योगमा कार्यरत उनले उद्योगदेखि नै संक्रमण भयो कि भन्ने शंका रहेको बताइन् । ‘रुघा लागेपछि पीसीआर जाँच गरें,’ उनले भनिन्, ‘नतिजा पोजिटिभ आएको १२ दिन पुगे पनि तिहारको दिन घर जान नपाइने अवस्था छ ।’ अर्को जाँच नहुन्जेलसम्म आइसोलेसनमै बस्ने उनले बताइन । सेलरोटी पकाउन सिपालु उनलाई सेल र चुकौनी खान ज्यादै मन पर्छ । रंगोली बनाउने र आफ्ना दाजुभाइ नभए पनि सानिमाका छोरालाई भाइटीका लगाइदिने गरेको सम्झिरहेकी छन् । परिवारले फोन गर्दा छिटो घर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको उनले सुनाइन् ।
डेंगु र ग्यास्टिकको समस्याले गत कात्तिक २५ मा बुटवलको एक अस्पतालमा ल्याइएका नवलपरासी पश्चिम बर्दघाट–१२ का ६३ वर्षीय एक पुरुष पीसीआर रिपोर्ट पाेिजटिभ देखिएपछि भैरहवाको भीम अस्पतालको आइसोलेसनमा छन् । ‘प्रतापपुरकी बहिनी टीका लगाइदिन आउँथिन्,’ उनले भने, ‘अब चाँडै निको हुन पाए, बहिनीलाई भेट्थें र तिहार भाग दिन्थें ।’ आफूमा कोरोना संक्रमणको लक्षण केही नदेखिएको भए पनि ग्यास्टिकका कारण छातीमा समस्या भएको उनले सुनाए । उनलाई कुर्नका लागि अस्पताल बाहिर बसेका ४७ वर्षीय छोराले समेत यस वर्ष निधार रित्तो राख्ने भएका छन् । ‘मलाई कुर्नुपर्दा छोरो पनि घर जान पाएन,’ मलिन आवाजमा उनले भने, ‘छोरीहरूसमेत निराश हुने भए ।’ तिहारमा छोराछोरी, नातिनातिनासँग रमाइलो गर्ने र देउसी खेल्न आउनेको प्रस्तुति हेरेर रमाउने गरेको उनले बताए । बुबालाई कुर्न बसेका छोराले पनि बुबा निको भए खुसी हुने भन्दै चाडपर्व पछि मनाउन सकिने बताए ।
एन्फा आइसोलेसनमा गत मंगलबार भर्ना भएकी बुटवल–२ की ४२ वर्षीया महिलालाई जागिरकै क्रममा कोरोना पोजिटिभ देखियो । बुटवलको एक अस्पतालमा कार्यरत उनले हरेक तिहार मामाघरमा मनाउँथिन् । बागलुङ स्थायी ठेगाना भएकी उनले विगत डेढ वर्षदेखि अस्पतालको जागिरका कारण कोठाभाडामा लिएर बस्दै आएकी छन् । ‘कोठामा छोरा एक्लै छ,’ उनले भनिन्, ‘उसलाई मिठो मसिनो पकाएर खुवाउन पनि पाइनँ ।’ तिहारका बेला बटुक, पुरी र सेलरोटी पकाउने र खाने गरेको भन्दै उनले मानसिक रूपमा छोरालाई सम्झिएर पीर लाग्ने गरेको सुनाइन् ।
आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितले स्वास्थ्य अवस्थाबारे ख्याल गर्दै चाड मनाउन सुझाएका छन् । उनीहरूले बाहिर रहेका मानिसले समेत मास्क र दूरी कायम गर्दै चाड मनाए कोरोनाजस्तो भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिने भन्दै आफ्नो शरीरको हेरचाह सबैले गर्नुपर्ने बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा शुक्रबार १ सय ७६ जना कारोना संक्रमित थपिए । यससँगै प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या २१ हजार ३ सय ८७ पुगेको छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार रूपन्देहीमा ४० जना, बाँकेमा ३३ जना, बर्दियामा २५ जना, पाल्पामा १९ जना, दाङमा ८, नवलपरासी र रोल्पामा ७र७ जना, गुल्मीमा ६ जना, कपिलवस्तुमा ५ र प्यूठानमा ४ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो । प्रदेशमा हालसम्म १७ हजार ५ सय ४१ जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन् भने २ सय २४ जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो समय होम आइसोलेसनमा बस्ने बिरामी बढेको र अन्तिम अवस्थामा अस्पताल ल्याइने भएकाले मृत्यु दर बढेको बुटवल कोरोना अस्पतालका फोकल पर्सन डा. सुदर्शन थापाले बताए । घरमै रहेका संक्रमितले समेत स्वस्थकर खाना खाएर छिटो निको हुनेतर्फ लाग्नुपर्ने उनले बताए ।
(साभार ; कान्तिपुर दैनिकबाट)